Maalinta: Juun 29, 2019
Qorshaha Duulimaadka Qaadaya Qaadka Qaadka
Duulimaadkii 'THY' ee ka soo duushay Istanbul kuna socday Antalya ayaa ku dhacay adhiga shimbiraha hawada ku soo laabtay. Waxaa daaqad ka furmay daaqadda baakadaha. In kasta oo ay go’aaminayaan goobta laga raaco garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul, inbadan [More ...]
East Express 'Tam O An' Sawiraad Muuqaal ah oo la soo gabogabeeyey
Sida ku xusan Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, "Tam Tam O" East Express 2, oo ay martigelin doonto TCDD Taşımacılık A.Ş. Sawir Qaranka [More ...]
Shirkadda tareenada ee Holland, oo lacag ka heshay Nazis si ay u geeyaan Yuhuudda xeryaha qadarinta, waxay magdhow siin doonaan dhibbanayaasha iyo qoysaskooda. Sida laga soo xigtay wargeyska Sputniknews; Alan Ka heshay lacag ka timid Nazis si ay u geeysato Yuhuudda xeryaha [More ...]
Ardayda injineeriyada Burak ayaa dhammeystiray barnaamijka tababarka ee ay bixisay Oyak Renault iyada oo lagu gudajiray qaab dhismeedka mashruuca @ Hack @ AMA 6 Team-Top Value ", kaas oo la bilaabay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada in la beddelo dijitaalka iyo hal-abuurka. Oyak Renault, Maarso-Juun [More ...]
Mushaharka Hurdada TCDD: İzmir Tareenka Buluugga ah, Tareenka Buluugga ah ee Central Anatolian, East Express, South Express, Lake Van Express, Konya Blue Train iyo [More ...]
FSM ayaa xiran! Cufnaanta Metrobus Stops ayaa loo rogay Roob
Daraasaddan, oo ay soo saartay Wasaaradda Gaadiidka ee Buundada Fatih Sultan Mehmet waxaana la filayaa inay wadar ahaan wadarto maalmo 52, curyaamisay isu socodka magaalada Istanbul. Markii loo wareejinayo IMM wareejinta jadwalka xagaaga ee gaadiidka dadweynaha, dhibaatadii ayaa labanlaabantay. baabuurtooda [More ...]
Maanta taariikhda: 29 June 1969 Eastern Express ee Erzurum